क्रिस्टल व्हिस्की चश्मा: प्रकार, निर्माता र समीक्षा
घर र परिवार, सामान
व्हिस्की पेय मान्नेहरूले लागि सिर्जना भएको थियो। यो सुगन्ध र परम्परा को स्वाद आनन्द गर्नेहरूका लागि उपयुक्त छ। को फूलगुच्छा र स्वाद को सही अर्थमा को खुलासा महत्त्वपूर्ण भूमिका यो प्रयोग गरिन्छ देखि व्यञ्जन, खेल्छ। ग्लास देखि भनिन्छ व्हिस्की छ?
ज्यादातर यस पेय अन्तर्गत व्यञ्जन ग्लास बाट बनेको छ। कहिलेकाहीं तापनि तपाईँ क्रिस्टल चश्मा र व्हिस्की पाउन सक्नुहुन्छ, तर यो एक विशिष्ट छैन व्यञ्जन प्रकारको। अक्सर यो पेय को साँचो connoisseurs खरिद छन् संकलन वा उपहार विकल्प छ।
सेट को ठूलो भाग उपलब्ध आज बनेको छ ग्लास। ग्लास विभिन्न गुणहरू र thicknesses सजावट को एक किसिम प्रयोग गरिन्छ प्रयोग। उदाहरणका लागि, व्हिस्की "बोहेमिया" ग्लास प्लेटिनम वा सुन-जलप वा तुवाँलो संग सजाया गर्न सकिन्छ, र रत्नहरू संग सजाया। तर, यो tinsel को पेय गुणस्तर र कहिलेकाहीं पनि यसको फूलगुच्छा मूल्याङ्कन गर्न रोकावट सम्बन्धित छैन।
चश्मा को प्रकारको फाराम को पाँच संस्करण कुनै पनि मामला मा सामाग्री को निर्माण चासोको विषय छैन।
व्हिस्की को tulip ग्लास - पूर्ण ग्लास - त्यहाँ एक गिलास आफ्नो भाषा बारी छैन भनिन्छ छ हुनत। एक संकुचित घाँटी संग शास्त्रीय फारम, पातलो, मनोरम खुट्टा - यो यस्तो व्यञ्जन व्हिस्की व्यवसायीक पिउन छ। आज, ग्लास को यस विशेष फारम को उत्सव को एक किसिम मा झन् बलियो, उच्च-गुणस्तर, वृद्ध प्रेमीहरूलाई रुचि एकल मल्ट व्हिस्की। रक्सी tastings समयमा सनकी sommeliers साथै तिनीहरूलाई यो फारम एक गिलास दिन आवश्यक छ। यस्तो unanimity connoisseurs कारण के हो? कुलीन रक्सीको अत्यन्तै स्वाद र भव्य सुगन्ध एक कचौरा आकारमा यो प्रकट गर्न सबै भन्दा राम्रो छ भन्ने तथ्यलाई। ग्लास को आदर्श रकम - 100-140 एमएल। व्हिस्की को फराकिलोकालागि बिन्दु सम्म यसलाई मा हालिएको छ - त्यसैले यो ग्लास माथिल्लो भाग मा aromas को एक उच्च एकाग्रता हासिल गर्न सम्भव छ। स्टेम पेय वार्मिंग बच्न लागि टेस्टिङ आवश्यक छ समयमा तुलिप राख्नुहोस्।
अन्यथा, यो भर बरफ संग भनिन्छ। यी चश्मा साधारण सबैभन्दा जस्तै व्हिस्की, तर कम र व्यापक। अक्सर गल्ती यस प्रकारको व्हिस्की पिउने लागि क्लासिक छ भन्ने विश्वास गर्छन्। चलचित्रहरू मा वास्तविक जीवन मा तपाईं हामी देख्न व्हिस्की को तस्वीर, एक गिलास मा सेवा पट्टी भ्रमण गर्दा किनभने यस्तो धारणा मात्र गठन भएको थियो। पबहरूमा आफ्नो विकल्प बस बताए कर्मचारीहरु - यस्तो ग्लास मा बरफ राख्न थप सुविधाजनक छ। तर विरोधाभास तपाईं व्हिस्की मा बरफ राख्न सक्नुहुन्छ! उनले सबै जसको लागि यो र दुनिया भर प्रेम गुणहरू, चिसो, यो महान पेय हत्या। यो खाने कि बाहिर जान्छ रक्स मा व्हिस्की, तपाईं सुगन्ध र स्वाद पाउनेछन् छैन, र अझै कम रक्सी "bodyagi" पिउन।
साथै, bartenders भर बरफ संग छिटो यसलाई मा खन्याउन रूपमा, कर्मचारी थप मानिसहरूलाई सेवा गर्न समय छ छोटो अवधिको लागि रुचि क्रमशः। खैर, bartenders अक्सर तपाईं पूर्णतया फरक पकवान मा पेय खन्याउन चाहिन्छ भनेर पनि थाह छन्।
यस्तो चश्मा व्हिस्की अक्सर विज्ञापन वा पेय सम्बन्धित उत्पादनहरु मा देखिन्छ। यो धेरै व्हिस्की पिउने लागि सबैभन्दा उपयुक्त कन्टेनर हो भन्ने विश्वास के गर्न नेतृत्व गरेको छ। तर यो पूर्ण सत्य छैन। रक्स एक मोटी तल, सीधा पर्खालहरु छ। तर शीर्ष, तल भन्दा व्यापक भएको भर बरफ संग, को विरोध रूपमा। एक गिलास ह्विस्की आधारित ककटेल पिउने लागि उपयुक्त, तर यो मामला मा पेय को स्वाद वा स्वाद को कुनै पनि कुनै प्रश्न। तथापि, गुणहरू जो यी ककटेल सामान्यतया सबै सस्ता पेय, जो शायद व्हिस्की सकिन्छ खन्याउन यदि तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ।
बस, यी चश्मा व्हिस्की चश्मा भनिन्छ। तिनीहरूले एक सानो अब, मोटा तल छन्, तर सामान्य मा - एउटै छ। अझ यो "छोटो ग्लास" साधारण संग एक सुडकना आफ्नो पेय को कि "स्ट्याग"। हुनत व्हिस्की, यस्तै गढ, छैन वोदका बावजुद। र कुनै तरिकामा यो जस्तो, त्यसैले तपाईं एक सुडकना प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हराएको सबै गुण र व्हिस्की को लाभ।
उहाँले चाहन्छ रूपमा पाठ्यक्रम, एक रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ। ठीक व्हिस्की को सही ग्लास, आराम जीवनको नशीला स्वाद महसुस गर्ने मौका दिन हुनेछ - तथापि, तपाईं सधैं राम्ररी तपाईं पिउने वास्तवमा आनंद, आराम गर्न चाहन्छु।
यस प्रकारको सबै अघिल्लो व्यक्तिहरूलाई को सबै भन्दा राम्रो गुण जोडती। लामो नाजुक खुट्टा, पूर्ण अप संकुचित भइरहेको छैन - यो एकल मल्ट व्हिस्की पिउने लागि विशेष डिजाइन गरिएको छ। आफ्नो फारमको सबै भन्दा राम्रो डिजाइनर र कलाकारहरूको काम गरे। पातलो ग्लास, ग्लास बनेको छ जो, आफ्नो भित्र मा दाग रमाइलो गर्न मौका दिनुहुन्छ। आकार र ग्लास को वजन यो धेरै प्रयोग गर्न सहज बनाउन।
व्हिस्की एक गिलास (माथि परिभाषित प्रत्येक को नाम) छनौट गर्दा, यो प्राप्त छ जो लागि पेय गुणस्तर देखि अगाडि बढ्न पर्छ। एकल मल्ट व्हिस्की लामो अनावरण को एक महंगा बोतल किन्न योजना - स्वाद रमाइलो गर्न जा हो। यो सोच्न पनि लायक छैन - केवल एक "Tulip" यो पूर्ण उपाय मा गर्न अनुमति दिन्छ। यो पुष्टि यो पेय को समीक्षा प्रेमीहरूको।
अक्सर प्रश्न चश्मा किन्न के, उठ्छ। व्हिस्की पिउने को संस्कृति समर्पित व्यवसायी, त्यहाँ व्हिस्की को सही ग्लास उत्पादन गर्न सक्षम छन् जो दुई अग्रणी निर्माताहरु छन् कि निष्कर्षमा आए। यी कम्पनीहरु को नाम: Spiegelau र Riedel।
Spiegelau पाँच अधिक सय वर्ष पिउने लागि उच्च गुणस्तरीय Glassware एक निर्माता छ। यो सबै समय, मास्टर र फारामहरू र प्रविधिहरू सुधार। यस पेय को मर्यादा जोड गर्न अनुमति जो विस्तार गर्न ठूलो ध्यान गरिएका चश्मा, को उत्पादन।
Riedel कम्तिमा चिरपरिचित निर्माता - यसको इतिहास बारे 250 वर्ष पहिले थाले। अब उत्पादनहरु को सबै भन्दा उत्पादनहरु को उच्च गुणवत्ता संकेत, स्वयं उत्पादन सम्म। कम्पनी को प्रत्येक कर्मचारी को उत्साह र रचनात्मकता उच्च गुणवत्ता अष्ट्रीया ग्लास को एक साँच्चै भव्य उत्पादन बनाउन संभावना गर्न पुगे।
, तपाईं विश्वका मानिसहरू धेरै रूपमा यो पेय जस्तै हिजो, ह्विस्की एक गिलास को नाम, र यदि तपाईं सिकेका भने यो लक्जरी रक्सीको प्रयोगबाट अधिकतम आनन्दको प्राप्त गर्ने अधिकार रक्सी चश्मा किन्न निश्चित हुन। तपाईं व्हिस्की को माया साझा साथीहरू छ भने, तपाईं बस चश्मा को एक सेट किन्न आवश्यक - यो मित्र ध्यान र हेरविचार गर्न देखाउन मौका दिनेछु।
अब तपाईं प्रकारका बारेमा थाहा व्हिस्की लागि चश्मा को, तपाईं व्यवहार मा ज्ञान लागू गर्न सक्नुहुन्छ। निर्धारित घटना "एक सय प्रतिशत" मा मूल्यांकन गरिनेछ गर्दा खरिद रक्सी, मात्र विश्वसनीय प्रदायकहरू गर्न निर्देशित हुनुपर्छ।
एक गोफन-रूमाल के छ। बच्चाहरु को लागि घुमावदार: "जेब भन्दा क्रस", "Cradle", "कंगारू"
ब्राण्ड बैग। स्टाइलिश सामान को सफल विकल्प लागि महिला रहस्य
स्वचालित ईेशनर एयर Wick FreshMatic: समीक्षा
सूटकेस रेडमन्ड: तस्बिर र समीक्षा
खिडकियों मा फिल्टर: समीक्षा
कारहरुको लागि म्याट फिलिम। यसलाई कसरी गोंद के छ?
"सञ्झ्याल महादेश": समीक्षा। "सञ्झ्याल महादेश" (नयाँ Windows): समीक्षा
यौन ओठ मा सानो ट्युमर: शिक्षा, निदान र उपचार को कारण
कसरी "वचन" मा जोड राख्न: दुई तरिकामा
प्रधान दूत (Marvel हास्य) - एक शक्तिशाली "समर्थन हावा"
गोभी - आहार लागि अपरिहार्य उत्पादन। नुस्खा बन्दागोभी cutlets
Thoracic neuralgia। thoracic neuralgia को उपचार। Neuralgia: कारणहरू, लक्षण
प्रेम बारे सर्वश्रेष्ठ नाटक। प्रेम बारे नाटक: सबै भन्दा राम्रो को सूची
खेल "मेरो त्यागिएको।" Minecraft मा छोडेर माइन्स
व्यक्तित्व गैर grata - यो अर्थ के हो?
राजनीतिक कुलीन को प्रकार: अवधारणा, निर्मित को विधिहरू
फिनल्याण्ड मा Joulupukki, वा नयाँ वर्ष भ्रमण
आफैलाई गरेर CPU तापमान तपाईं कसरी थाहा छ?